Golaha Wakiiladda oo Digniin u Diray Cid Kasta oo Si aan Sax ahayn u Dhaliisha Xeerka Booliska
Hargaysa (Dawan): Golaha Wakiiladda Somaliland ayaa uga digay cid kastoo sifo aan sharci ahayn u dhaliisha xeerka booliska ee Xeer Lr.63/2018-ka, taasoo ay ka dhalan karaan xad-gudub iyo dunuub culus.
Sidaasina waxaa lagu sheegay war qoraal ah oo ay ka soo saareen golaha Wakiiladu oo ku aadan dhaliilaha loo jeediyay xeerkaasi oo nuqul ka mida uu soo gaadhay wargeyska Dawan, ayaa lagu faahfaahiyay nuxurka xeerkaasi iyo qodobadda ku jiraa in ay ka farcameen dastuurta Somaliland.
Waxaana warkaasi lagu sheegay in iyagoo ka duulaya eedaha xeerka ay u jeediyeen qaar ka mida ah hay’aha xuquuqda aadanaha u doodda qaarkood in ay doonayaan in bulshadda ay u cadeeyaan in xeerka boolisku leeyahay ahmiyad iyo wafaqsanaan dastuuri ah oo kor loogu qaadayo ilaalinta xuquuqda muwadiniinta.
Sidoo kale warkaasi ay golaha Wakiiladu soo saareen ayaa digniino loogu diray hay’adaha dhaliilay iyo warbaahinta madax banaan iyo cid kastoo si aan sax ahayn u fasirta xeerkaasi bulshada na lagu jaah-wareeriyo.
War-saxaafadeedkaasi ayaa u dhignaa sidan: “Madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland wuxuu golaha Wakiillada u soo gudbiyay soo-jeedin ah wax ka beddel iyo kaabis la xidhiidha xeerka booliiska Xeer.Lr.63/2018. Sidaa daraaddeed, golaha Wakiillada JSL isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu dood ka yeeshay soo-jeedimaha xukuumaddu soo gudbisay si waafaqsan hab-raacyada sharci-dejineed ee dastuurka iyo xeer –hoosaadka golaha Xeer.Lr.12/2014, goluhu wuxuu cod ku ansixiyay qodobbadii xukuumadda ka soo noqday.